Apple weputara ọkwa Apple Watch ọhụrụ abụọ Akụkọ akụrụngwa
Apple weputara ọkwa Apple Watch ọhụrụ abụọ
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ gasịrị, Apple webatara ọgbọ nke abụọ nke Apple Watch, nwere ụdị abụọ dị iche iche: Usoro 1 na Usoro 2, nke dị iche na nke gara aga na nguzogide mmiri na GPS jikọtara nke na-enye ya ohere iji ya na-enweghị mkpa ibu iPhone mgbe anyị na-aga na-egosipụta. Mana ire ahịa nke a abụghị ihe Apple nwere ike ịtụ anya ya na ịkwalite ọgbọ nke abụọ a amalitela mgbasa ozi mgbasa ozi iji kpọsaa ụdị ndị ọhụrụ. Mgbasa ozi abụọ ahụ lekwasịrị anya na Usoro 2, ihe nlere anya maka ndị ọrụ na-eme ụdị egwuregwu, ma ọ bụ n'ime ma ọ bụ n'èzí.
Mgbasa ozi izizi akpọrọ Go Play, na-egosi anyị ikike nke ngwaọrụ ịkọpụta mmega ahụ anyị na-eme mgbe anyị na-eme egwuregwu, na nke a bọọlụ. Nkwupụta nke abụọ na-agwakwa anyị uru nke Apple Watch Series 2, mana oge a ọ na-elekwasị anya na ihe nlereanya nke ụlọ ọrụ Cupertino mebere na Nike, ụdị akpọrọ Apple Watch Nike +. ihe Apple Watch Series 2 na otu eriri na ihu nche naanị anyị nwere ike ịchọta na ngwaọrụ a.
N'oge a ka emepụtara naanị mgbasa ozi ndị a na United Kingdom ma ọ dị na akaụntụ YouTube nke Apple na mba a, mana echere na na mbata nke ekeresimesi, Apple ga-agbasawanye mba ebe a ga-egosipụta mgbasa ozi a. Na vidiyo a, anyị nwere ike ịhụ ka onye ọrụ jiri mepee ngwa ngwa ngwa ngwa ahụ, tinye ya na nkwojiaka ya wee malite ịgba ọsọ iji gụpụta mmega ahụ ọ na-arụ, mgbe ịnata amamọkwa site na ngwaọrụ, amamọkwa na, dị ka anyị pụrụ ịhụ, na-egosikwa na a dị iche iche format karịa ihe watchOS na-eji na-.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Apple weputara ọkwa Apple Watch ọhụrụ abụọ
Egwuregwu aka, ma ọ bụ basketball, Njikọ nke Akụkọ Ochie jupụtara na Palau Sant Jordi
NASA na KAIST sonyere Stephen Hawking's Breakthrough Starshot oru ngo